Our Lovely Mother Suu(Photos) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » Our Lovely Mother Suu(Photos)
Our Lovely Mother Suu(Photos)
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Jun 16, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Politics, Issues |4comments
ချစ်သော အမေစု နိုဘယ်ဆုရ အမျိုးသမီးများ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း
1997 International Campaign to Ban Landmines and Jody Williams(U.S.)
2011 Jointly to Ellen Johnson Sirleaf (Liberia), Leymah Gbowee (Liberia), and Tawakkul Karman (Yemen) “for their non-violent struggle for the safety of women and for women’s rights to full participation in peace-building work.”
2009 Herta Müller of Germany
Marie Sklodowska Curie (Physics, 1903 and Chemistry, 1911)Marie Curie is considered the most famous of all women scientists. She was the only woman ever to win two Nobel Prizes. By the time she was 16, Marie had already wonagold medal at the Russian lycée in Poland upon the completion of her secondary education. In 1891, almost penniless, she began her education at the Sorbonne in Paris. In 1903 her discovery of radioactivity earned her the Nobel Prize in physics. In 1911 she won it for chemistry.
Rosalyn Sussman Yalow (Physiology or Medicine, 1977)Rosayln Yalow won the Nobel Prize for developing radioimmunoassay,atest of body tissues that uses radioactive isotopes to measure the concentrations of hormones, viruses, vitamins, enzymes, and drugs.
Christiane Nüsslein-Volhard (Physiology or Medicine, 1995)Christiane Nüsslein-Volhard won the Nobel Prize using the fruit fly to help explain birth defects in humans.
Françoise Barré-Sinoussi (Physiology or Medicine, 2008)Barré-Sinoussi won the Nobel Prize with Luc Montagnier (both France) for their discovery of the human immunodeficiency virus (HIV)
Elizabeth H. Blackburn and Carol W. Greider (Physiology or Medicine, 2009) Blackburn and Greider, both of the U.S., along with fellow American Jack W. Szostak, won the Nobel Prize for their “discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase
မိုက်ကယ် အဲရစ်နဲ့ အတူ
ကမ္ဘာ့ အမျိုးသမီးထု အကြားအင်မတန်ရှားပါးလှသော မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမေစုတစ်ယောက်
ယနေ့ နိုဘယ်ဆု လက်ခံယူတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ပြုံးပျော်ရွှင်နေတာ အားလုံးမြင်ကြ၊တွေ့့ကြမှာပါ။
ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသော၊ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးကို လိုလားသူအမေစု၏ များပြား
လှသော တာဝန်များအပြင် တိုင်းပြည်အပေါ်တွင်ထားသော မေတ္တာတရားကြောင့် ကျနော်တို့ အမေ့ကို
ယနေ့ ဤပို့ စ်ကိုတင်ရခြင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အမှတ်သညာအဖြစ် ကျနော်တို့ လဲ အတူတူချစ်ခင်စွာ
နေထိုင်ကြလျှက်၊အမေစု အတွက်၊ဂုဏ်ပြုစကားအပြင် အသက်ရှည်၍ အနာကင်းပါစေကြောင်း ဆုမွန်ပါ
ချွေလိုက်ရပါ၏။(၁၉၉၁)ခုနှစ်က ဘဲရရှိခဲ့တဲ့ ဆုကိုနှစ်ပေါင်း(၂၂)နှစ်ကြာ မှသွားယူနိုင်ခဲ့တာ ကိုခုမှ ဝမ်းသာ
ရတော့တယ်။နော်ဝေ မှာတော့ နော်ဝေရောက် မြန်မာတွေ စုံစုံညီညီလာရောက်တွေ့ ဆုံနေကြပါတယ်။
ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ မြန်မာ့သမီးကောင်း ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို နာခံသူဖြစ်လေ၏။
အမေစု ကျန်းမာ သက်ရှည် ပါစေ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ … အမေစုရဲ့ အောင်မြင်မှုကို … ပြောမပြနိုင်လောက်အောင် ဂုဏ်ယူမိပါတယ် … ။ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာမှ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ….
အာရှနိုင်ငံများထဲမှာ …. နိုဘယ်ဆုရှင်အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တာနဲ့တင် …ကျေနပ်လို့ မဆုံးပါဘူး … ။
ဒါကြောင့်ပြောတာ…. တရားကို နတ်စောင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားက ….. အလကားပြေားခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူးထင်ပါရဲ့….
နိုဘယ်ဆုထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပေးတဲ့ဆုက အမြင့်ဆုံး မို့ လားဗျ ။
အမေစု အတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ဗျို့ ။
ဒီနေရာကနေ ဘဲ နော်ဝေဆီက အမေစုအတွက် အခမ်းအနားကျင်းပနေချိန်မှာ ဆုမွန်ချွေတာပေါ့ဗျာ။
ဒါနဲ့ သူကြီးရေ. အမေစုပုံလေး တစ်ပုံလောက်မှ မပါလို့ စိတ်မဆိုးကြေးနော်။မနက်မှဘဲ ပြန်edit လုပ်ပါ